(ကရိုဏ်း) (Instrumental Case)(ကရဏကာရက)
ရေးခဲ့ပြီးတဲ့ ၀ါကျတွေကိုပဲ ပြန်ဖတ်ကြည့်..
ယောက်ျားသည် ရွာသို့ သွား၏။
သင်ခန်းစာအသစ်မှာ ပြောမှာက အဲဒီယောက်ျားက ရွာကို ဘယ်လို သွားမှာလဲ၊ ဘာနဲ့ သွားမှာလဲ ၊ ဘယ်သူနဲ့ သွားမှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေပါ...။ How does he go? By what? With who? မြန်မာစကားမှာ နှင့် သို့မဟုတ် ဖြင့် လို့ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားရတဲ့ စကားလုံးမျိုးကို ပါဠိဘာသာနဲ့ ကရဏကာရကလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အလွယ်မှတ်တော့ ကရိုဏ်းပေါ့..။ (သဒ္ဒါအသုံးအနှုံးတွေကို ခေါင်းကိုက်အောင် သိပ်မမှတ်နဲ့.. သဘောကိုပဲ နားလည်အောင် လုပ်..။)
ကဲ ယောက်ျားက ရွာကို ရထားနဲ့ သွားမယ်..။မြန်မာဝါကျလေး ကောက်ရေးလိုက်ပြီ..။
ယောက်ျားသည် ရွာသို့ ရထားဖြင့် သွား၏။
ရထ (ရထား)ဆိုတဲ့ ပါဠိစကားလုံးရဲ့ နောက်မှာ ဧန (ena) ဆက်ပေးလိုက်..။
အများကိန်းမှာတော့ ဧဟိ ( ehi) သို့မဟုတ် ဧဘိ (ebhi)ဆက်ပေးရုံပါပဲ..။
ကဲ ပါဠိဝါကျလေးတွေ ရေးလို့ရသွားပြီ..
ပုရိသော ဂါမံ ရထေန ဂစ္ဆတိ။
ပုရိသာ ဂါမေ ရထေဟိ(ဘိ) ဂစ္ဆန္တိ။
ယောက်ျားတို့သည် ရွာများသို့ ရထားတို့ဖြင့် သွားကြကုန်၏။
ဒီမှာ ဆက်ပြီးတော့ လေ့လာရမှာက ရွာကို ရထားနဲ့ သွားတာတော့ ဟုတ်ပြီ..။ ဘယ်သူနဲ့ အတူ သွားတာလဲ..။ စာသံပေသံဆိုရင်တော့ မည်သူနှင့် ပေါ့..။ အဲဒီမှာနှင့် ဆိုတာလေးကို သတိထား...။ နှင့်ဆိုရင် အတူ ဆိုတာလေး ကပ်ပါလာလေ့ရှိတယ်..။ ပါဠိမှာလည်း အတူတူပဲ နှင့် လို့ ဘာသာပြန်ရတဲ့ ကရိုဏ်းစကားလုံးရဲ့နောက်မှာ သဟ သို့မဟုတ် သဒ္ဓိံ ဆိုတဲ့ ပါဠိစကားလေးကို မမေ့မလျော့ထည့်ပေးရမယ်..။ ဖြင့် လို့ ဘာသာပြန်ရတဲ့ စကားလုံးနောက်မှာတော့ အတူ ဆိုတာ ထည့်စရာမလို..။ ဖြင့် အတူ လို့ မသုံး..။ နှင့်အတူ သာ သုံးကြလေရဲ့..။
ယောက်ျားသည် မိတ်ဆွေနှင့် အတူ ရွာသို့ ရထားဖြင့် သွား၏။
မိတ်ဆွေနှင့် (မိတ္တ+ဧန=မိတ္တေန)အတူ (သဟ/သဒ္ဓိံ)
ပုရိသော မိတ္တေန သဟ ဂါမံ ရထေန ဂစ္ဆတိ။
(ယောက်ျားသည် မိတ်ဆွေနှင့် အတူ ရွာသို့ ရထားဖြင့် သွား၏။)
မြန်မာဝါကျလေးတွေ ပါဠိလို ရေးကြစေဗျား..။
ရဟန်းသည် ဘုရားရှင်ကို မိတ်ဆွေနှင့် အတူ ဖူးမြင်၏။
သာဝကတို့သည် ဘုရားရှင်နှင့်အတူ ကျောင်းတော်သို့ ကြွကြလေ၏။
မြင်းသည် ခွေများနှင့် အတူ တောင်သို့ ပြေးသွား၏။
လူငယ်သည် ဆီးမီးကို ကျောက်ခဲဖြင့် ထု၏။
ကုန်သည်တို့သည် သမင်ကို မြားဖြင့် ပစ်ခတ်ကြ၏။
လယ်သမားတို့သည် တွင်းများကို လက်တို့ဖြင့် တူးကြ၏။
လူငယ်တို့သည် ဦးလေးနှင့် အတူ ကျောင်းသို့ ရထားဖြင့် သွားကြ၏။
ပုဏ္ဏားကြီးသည် မိတ်ဆွေနှင့်အတူ ထမင်းကို ချက်၏။
ဘုရင်သည် ပညာရှိများနှင့်အတူ ကျွန်းကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏။
ဘုရင်တို့သည် သားတော်များနှင့် အတူ ရဟန်းတို့ကို ဖူးမျှော်၏။
ခက်ချင်လည်း ခက်ပေလိမ့်မယ်..။ မခက်စေနဲ့..။
နှင့်နဲ့ ဖြင့် ကိုတော့ သတိမူကြလေ..။
နှင့် ဆိုရင် အတူ (သဟ သို့မဟုတ် သဒ္ဓိံ) ထည့်ရေးကြလေ..။
(တပည့်တစ်ဦးက ပါဠိအသံထွက်ထူးခြားတာလေးတွေ ရှင်းပြပေးဖို့ လျှောက်ထားလာပါတယ်..။ နိုင်ငံတကာမှာတော့
စ ဆ ဇ ဈ ဒီလေးလုံးကို ကျ ချ ဂျ ဃျ ၊
သ ကိုတော့ ဆ လို့ အသံထွက်ပါကြောင်း..
တ ထ ဒ ဓ ဒီလေးလုံးကိုတော့ ဆရာဘုန်းတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်း သေချာအောင် အသံမထွက်နိုင်ပါကြောင်း..။ ဋ ဌ ဍ ဎ တို့နဲ့ အသံတူသယောင်ယောင်ရှိပေမယ့် ဘာသာဗေဒဂုရုကြီးများရဲ့ အလိုအရ လုံးဝ လုံးဝ မတူပါကြောင်း..။)
Posted by ဓမ္မဂင်္ဂါ at 6:48 PM
ဖူးမြင်တာရယ် ဖူးမျှော်တာရယ် မတွေ့ဘူးဘုရား။ မြင်တယ်လို့ ပြန်ရမလား၊ ရှိခိုးတယ်လို့ ပြန်ရမလား ... ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေလို့။
နံပါတ် ၄ - မှာ ကျောက်ခဲဖြင့် ထု၏၊ ထုတာ မတွေ့လို့ ပစ်ခတ်တယ်လို့ ပြန်ရင် ရပါသလား ဘုရား။
မှတ်ရတာတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ များလာပြီ။ ခုလောက်အထိတော့ သိပ်မခက်သေးပါဘူး၊ အဆင်ပြေမယ် ထင်တာပဲ ဘုရား။ ပြီးရင် ပို့လိုက်ပါမယ်။ လောလောဆယ် အဲဒီစာလုံးတွေ မသိလို့ပါဘုရား။